आर्सेनिक ओक्साइड: तयारी र गुण
nonmetal - यस्तो आवधिक तालिका तत्वको, यस्तो आर्सेनिक रूपमा, यो धातु मा एक स्थिति ओगटेको छ। आफ्नो गतिविधि गरेर हाइड्रोजन र तामा बीच छ। गैर-धातु प्रकृति यसलाई ओक्सीकरण -3 (- arsine खरानी 3) को एक डिग्री खेती गर्न सक्षम छ भन्ने तथ्यलाई मा प्रकट गर्नुभयो। सकारात्मक ऑक्सीकरण +3 यौगिकों amphoteric गुण र +5 को डिग्री यसको अम्लीय गुण देखाउँछन्। आर्सेनिक ओक्साइड के हो?
आक्साइड र hydroxides
निम्न आर्सेनिक आक्साइड:2हे3र2हे5रूपमा। त्यहाँ पनि एक अनुरूप hydroxides छ:
Metamyshyakovistaya एसिड HAsO 2।
Ortomyshyakovistaya एसिड एच3Aso 3।
Metamyshyakovaya एसिड HAsO 3।
Ortomyshyakovaya एसिड एच3Aso 4।
4 हे7रूपमा Piromyshyakovaya एसिड एच 2।
आर्सेनिक trioxide के हो?
आर्सेनिक ओक्साइड जो दुई खेल्छ23 हे नाम trioxide छ रूपमा। यो पदार्थ, अक्सर उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर यो एक अहानिकारक रासायनिक छैन। यो अकार्बनिक मिश्रित एक प्रमुख स्रोत organoarsenicheskih यौगिकों र धेरै अन्य (कार्बन बन्धन ग समावेश यौगिकों) छ जो। धेरै प्रयोग23 हे रूपमा किनभने तत्व को विषाक्त प्रकृति को विवादास्पद छन्। यो कम्पाउन्ड को व्यापार नाम Trisenox छ।
trioxide बारेमा सामान्य जानकारी
आर्सेनिक trioxide को रासायनिक सूत्र23 हे रूपमा निम्न फारम छ। को परिसर को आणविक वजन 197,841 G / mol छ। यो ओक्साइड प्राप्त गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। तिनीहरूलाई को एक sulphide अयस्क को बरस रही छ। निम्नानुसार रासायनिक प्रतिक्रिया छ:
2As23 हे + 9O2→ 2As23 हे + 6SO 2
को आक्साइड को सबै भन्दा अन्य अयस्क को प्रक्रिया को एक byproduct रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। Arsenopyrite सुन र तामा मा एक साधारण impurity छ, र जब हावा को उपस्थिति मा गरम यो आर्सेनिक trioxide विज्ञप्ति। यो गम्भीर विषाक्तता गर्न सक्छ।
को आर्सेनिक trioxide संरचना
आर्सेनिक trioxide तरल र ग्यास चरणहरु4हे6रूपमा सूत्र (तल 800 ° C) छ। यी चरणहरु मा, यो fosforovym trioxide (पी4हे 6) संग isostructural छ। तर,2हे3रूपमा आणविक4हे6संक्षिप्त रूपमा माथि 800 ° C तापमान मा। यो चरण मा यो diizotrona trioxide (एन ओ23) संग isostructural छ। यसको ठोस अवस्थामा, यो कम्पाउन्ड polymorph क्षमता (क्रिस्टल संरचना को दुई वा बढी प्रकारका अवस्थित क्षमता) देखाउँछ।
आर्सेनिक trioxide को गुण
निम्नानुसार आर्सेनिक trioxide आधारभूत गुणहरू छन्:
trioxide समाधान पानी कमजोर एसिड गठन। यो amphoteric मिश्रित एक एन्टिमोनी ओक्साइड छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
यो alkaline समाधान मा घुलनशील छ र arsenate दिन्छ।
आर्सेनिक trioxide हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल) मा एक उच्च विलेयता, घुलनशीलता छ, र अन्तमा एक एकाग्रचित्त आर्सेनिक trichloride र एसिड प्रदान गर्दछ।
यो pentoxide दिन्छ जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन र नाइट्रिक एसिड बलियो Oxidants को उपस्थिति मा (2 हे5रूपमा)।
उहाँले जैविक सल्वैंट्स मा लगभग अघुलनशील छ।
यसलाई सामान्य शारीरिक अवस्थामा सेतो ठोस जस्तो देखिन्छ।
यो 312,2 ° C को एक पग्लिने बिन्दु र 465 ° सी को एक उम्लनेबिन्दु छ
यो सामाग्री को घनत्व 4.15 जी /3सेमी छ।
चिकित्सा आर्सेनिक trioxide को प्रयोग
यो रासायनिक antineoplastic एजेन्ट को एक वर्ग छ, र क्यान्सर को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। आर्सेनिक विषाक्तता प्रसिद्ध छ। तथापि, आर्सेनिक trioxide धेरै वर्ष को लागि क्यान्सर को केहि प्रकार व्यवहार गर्न प्रयोग केमोथेरापी लागूपदार्थ छ। यो उपचारको लागि प्रयोग समाधान समाधान भनिन्छ Fowler। 1878 मा godu बोस्टन शहर अस्पताल यो समाधान मानिसहरूलाई मा leukocytes को संख्या कम प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने रिपोर्ट।
फलस्वरूप23 हे मुख्य रूप रूपमा लामो यो रेडियोथेरेपी बदलिएको छ सम्म लेकिमिया को उपचार को लागि प्रयोग भएको थियो। तर 1930 पछि, यो बिस्तारै यसको लोकप्रियता लेकिमिया को उपचार मा, जब सम्म वहाँ एक आधुनिक केमोथेरापी थियो पुनःप्राप्त। यो आर्सेनिक ओक्साइड पुरानो myelogenous लेकिमिया को उपचार को सबै भन्दा राम्रो विधि मानिन्छ। पनि आज यो पदार्थ असफल retinoid वा anthracycline रसायन चिकित्सा संग तीव्र promyelocytic लेकिमिया को एक विशेष प्रकार उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ। यो पनि पुरानो myeloid लेकिमिया, एकाधिक myeloma, तीव्र myeloid लेकिमिया, लिंफोमा, को लसीका प्रणाली को क्यान्सर को उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ।
आर्सेनिक trioxide व्यापक बेरंग ग्लास को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। इलेक्ट्रनिक्स अर्धचालक र केही मिश्र निर्माण गर्न यो कम्पाउन्ड पनि उपयोगी छ। यो पेंट्स मा प्रयोग गरिन्छ। आर्सेनिक trioxide मस्तिष्क ट्यूमर को उपचार प्रभावकारी हुन सक्छ।
विगतमा, यो पदार्थ दन्त चिकित्सा मा प्रयोग गरिन्छ, तर यो एक उच्च विषाक्त मिश्रित किनभने, आधुनिक दन्त चिकित्सा को प्रयोग बन्द गरिएको छ। आर्सेनिक ओक्साइड (2 हे सूत्र3रूपमा) पनि काठ लागि संरक्षण गर्ने बस्तु रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर यस्ता सामाग्री संसारको धेरै भागहरु प्रतिबन्ध लगाइएको हो। आर्सेनिक trioxide तामा एसीटेट संग संयोजन मा एक उज्ज्वल हरियो रंग दिन्छ।
अत्यधिक विषाक्त पदार्थ
Trioxide नै विषाक्तता को एक उच्च स्तरीय छ। त्यसैले, तपाईं सधैं तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नु अघि आवश्यक सावधानीहरु लिनुपर्छ। यसलाई निम्न अवस्थामा धेरै खतरनाक हुन सक्छ:
भोजन।2हे3रूपमा, झुक्किएर पाचन पर्चा मा हुन्छ भने, तपाईं तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ। यसलाई चिकित्सा सहायता खोज्दै अघि उल्टी induce गर्न प्रयास गर्न सिफारिस गरिएको छैन। यो यति मा, कुनै पनि तंग वस्त्र हटाउन आफ्नो टाई बन्द ले, कलर, बेल्ट unbutton गर्न र आवश्यक छ। डी
छाला संग सम्पर्क गर्नुहोस्। शरीर को कुनै पनि सतह संग सम्पर्क को मामला मा तुरुन्तै पानी प्रशस्त संग प्रभावित क्षेत्र धुन गर्नुपर्छ। दूषित लुगा र जुत्ता तुरुन्तै हटाउन पर्छ, र तिनीहरूले पुन: प्रयोग गर्नु अघि धोए गर्नुपर्छ। गंभीर छाला सम्पर्क को मामला मा, तपाईं तुरुन्त चिकित्सा सहायता खोज्नुपर्छ। यो साबुन र जीवाणुरोधी क्रीम आवेदन संग संक्रमित क्षेत्र को लुगा धुने disinfecting लागि उपयोगी हुन सक्छ।
आँखा सम्पर्क।2हे3आँखाले सम्पर्कमा आउछ भने, के गर्न पहिलो कुरा 15 मिनेट को लागि पानी संग कुनै पनि संपर्क लेंस र आँखा धुने हटाउन छ। यो चिसो पानी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस समानान्तर, कसैले एक एम्बुलेन्स कल छ।
Inhalation। ग्याँस inhaled गर्ने मान्छे, ताजा हावा संग एउटा फरक स्थानमा राखिएको हुनुपर्छ। साथै, तपाईं तुरुन्त चिकित्सा सहायता खोज्नुपर्छ। कठिनाई सास भने, अक्सिजन तुरुन्तै प्रबन्ध हुनुपर्छ। पीडित आफ्नै सास फेर्न असमर्थ छ भने, तपाईं कृत्रिम श्वसन दिन आवश्यक छ।
यो मिश्रित मानिसहरूलाई मा एक विषाक्त प्रभाव हुन सक्छ। आर्सेनिक trioxide को अत्यधिक मात्रा को इन्जेशन को मामला मा, यो पनि मृत्यु हुन सक्छ। सुरक्षा चश्मा र पन्जा सधैं गर्दा संग रूपमा23 हे काम प्रयोग गर्नुपर्छ। काम सधैं राम्ररी ventilated क्षेत्रमा बाहिर गर्नुपर्छ।
यो पदार्थ को साधारण साइड इफेक्ट जस्तै लक्षण समावेश:
leukocytes को उच्च स्तर;
उच्च रक्त शर्करा;
कम साधारण साइड इफेक्ट समावेश:
leucocytes कम स्तर;
मांसपेशी र हड्डी दुखाइ;
अनुहार र आँखा को सुनिंनु;
कम रक्त शर्करा;
रगत कम अक्सिजन स्तर।
2 रूपमा3हे को दुर्लभ साइड इफेक्ट:
अनियमित हार्टबिट (पनि मृत्यु सक्छ जो);
छाला को darkening।
जीवन खतरामा आर्सेनिक trioxide गर्न जोखिम को लक्षण - एक वजन, ज्वरो, कठिनाई साँस, सास को shortness, छाती दुखाइ, खोकी।
आर्सेनिक trioxide पनि जीवनको हानि गर्न सक्छ, जो एक उच्च विषाक्त पदार्थ छ। यद्यपि, यो चिकित्सा क्षेत्रमा उपयोगी हुन छ। हामी सधैं सावधानीहरु लिनुपर्छ।
आर्सेनिक trioxide एक amphoteric छ उच्च आक्साइड आर्सेनिक को र यसको जलीय समाधान weakly अम्लीय छन्। यसरी, यो arsenates प्राप्त गर्न alkaline समाधान मा सजिलै घुलनशील छ। यसलाई कम, एसिड मा घुलनशील हाइड्रोक्लोरिक बाहेक छ।
मात्र यस्तो ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड र नाइट्रिक एसिड बलियो Oxidants संग, यो2हे5रूपमा5को अम्लता एक डिग्री संग आर्सेनिक Penta-ओक्साइड को गठन गरिएको छ। ओक्सीकरण प्रतिरोध सन्दर्भमा, आर्सेनिक trioxide फस्फोरस trioxide, फस्फोरस pentoxide गर्न सजिलै जलाइएको छ जो भिन्न हुन्छ। कमी मौलिक आर्सेनिक वा arsine (खरानी 3) दिन्छ।
रासायनिक सूत्र pentoxide2हे5रूपमा छ। 229.8402 G / mol यसको चपाउने दात ठूलो। यो 4.32 जी /3सेमी को घनत्व संग सेतो hygroscopic पाउडर छ। पग्लिने बिन्दु 315 ° C, यो विघटित गर्न सुरु जो मा पुग्यो। पदार्थ पानी र रक्सी मा राम्रो विलेयता, घुलनशीलता छ। आर्सेनिक ओक्साइड गुण यो अत्यधिक वातावरण लागि विषाक्त र खतरनाक बनाउन। यो अकार्बनिक मिश्रित छ जो एक कम साझा अत्यधिक विषाक्त र उच्च आर्सेनिक ओक्साइड विपरीत (2 हे सूत्र3रूपमा), यसैले मात्र सीमित व्यावसायिक आवेदन भेट्टाउनुहुन्छ।
आर्सेनिक मुख्यतया एक विष र क्यान्सरज रूपमा चिनिन्छ। यसको trioxide - एक पानी घुलनशील पाउडर, एक, बेरंग स्वाद नभएको र बिना गंध समाधान उत्पादन जो। यो मध्य युग मा हत्या को एक लोकप्रिय विधि थियो। यसको प्रयोग आज, तर शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि र साना मात्रा मा जारी छ।
क्रास्नायार्स्क कृषि विश्वविद्यालय: चयन समिति, एक बित्दै जाँदा ग्रेड, विशेषता र समीक्षा
मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु। पश्चिमी युरोप मा पहिलो विश्वविद्यालयहरु
मास्टर - यो के हो?
म प्रमाणपत्र प्राप्त - विश्वविद्यालय चयन
Gubkin विश्वविद्यालय। Gubkin रूसी राज्य विश्वविद्यालय तेल र ग्याँस को: ठेगाना, आगमन, समीक्षा
KSU लागि खडा रूपमा? शिक्षा, पेशा को संकाय
अप्रत्याशित ककटेल "स्ट्राइक"
फ्रान्सेली फैशन के हो
रूस मा सानो आकार मानक - 90 * 50 मिमी
कसरी कम्प्युटरमा पासवर्ड राख्न: प्रयोगकर्ता सल्लाह
शब्दहरू के संयोजन phraseology भनिन्छ? यस प्रकार र phraseology उदाहरणहरू
एक बच्चा rectal स्थानच्युति छ भने के गर्ने? कारण
बोसो देखि व्यञ्जन। नाश्ता
"Lakalyut" (टूथपेस्ट)। दर्जा टूथपेस्ट। दन्त चिकित्सक सुझाव
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भपात को खतरा
Clementine के हो? उपयोगी गुणहरू, संरचना क्यालोरी clementines
Diction सुधार गर्न प्रभावकारी व्यायाम। diction अभ्यास लागि: सुझावहरू